သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1 မှတ်ချက် 555 views
လမ်းညွှန်သွားဆရာဝန်, set ကိုသုံးစက်ကိရိယာများကိုတက်, ကုထုံးများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုပွငျဆငျ, နှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုထိန်းသိမ်း.
တစ်ဦးချင်းစီ Make, တူရိယာပိုးမွှားသတ်သို့မဟုတ် sanitize, set tool ကိုကွန်တိန်နာတက်, သယံဇာတရင်းမြစ်များကို ပြင်ဆင်., သို့မဟုတ်သွားဘက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းနည်းစနစ်စဉ်အတွင်းသွားဆရာဝန်ကူညီ.
သွားရောဂါရှာဖွေ x ကိုရောင်ခြည်ဖော်ထုတ်.
လူများနှင့်သွားဆရာဝန်နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှတ်တမ်းများအရေးကြီးသောအရိပ်လက္ခဏာကို ယူ. သတင်းပို့.
ပစ္စုပ္ပန် postoperative ညွှန်ကြားချက်.
အတွက်, အသံ, နှင့်လေ့လာမှု Cast ဖွံ့ဖြိုး.
ဘုံသန့်ရှင်းမှုအတွက် client များကိုပြောပြပါ.
ရုပျပုံရေးဆှဲဆန်းစစ်တိုးပွားလာဘို့ပြန်လည်သုံးသပ် Cast များအတွက်အစောပိုင်းတွေ့ကြုံနှင့် occlusive မှတ်ပုံတင် Make.
အံသွားဖို့ဖလိုရိုဒ်ဓာတ်၏အကာအကွယ် finish ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချ.
အစီအစဉ်ကဏ္ဍများ, ငွေပေးချေမှုစေနှင့်သွားန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အခကြေးငွေရယူ, finish ကိုအာမခံအမြိုးမြိုး, နှင့်မှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်, pc လျှောက်ထားသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်.
မေးရိုး devices များနှင့်အရင်းအမြစ်များလီဆယ် .
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားအ-ကလူစုစုပေါင်းအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေးခြင်းဟုအဘယ်သို့, အဆိုပါအချက်များထုတ်လုပ်ထားကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်လာပြီ, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးခွန်းများကိုတောင်းဆို, အစားမသင့်လျော်အချိန်လေးမှာလမ်းပြနေထက်.
critical အတွေးအခေါ်-အသုံးပြုခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်တွေ့ရှိချက်များ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အကြောင်းရင်းများ, ပြဿနာများအခြားဖြေရှင်းနည်းများသို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်မှု.
သင်ယူခြင်းနည်းပညာ-လျှောက်ထားအသစ်ဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းများသင်ယူခြင်းသို့မဟုတ်နည်းပြအလုပ်ကိုအခါတိကျတဲ့အခွအေနေတငျပွ coachingOReducational မဟာဗျူဟာများနှင့်နည်းလမ်းများကောက်နေ.
သည်အခြားတစ်ဦးချင်းစီ၏စစ်ဆေးခြင်း-TrackingANDEvaluating ထိရောက်မှု, သင်ကိုယ်တိုင်, သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများကုစားလုပ်ရပ်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ရန်.
ရှုပ်ထွေးသော Problemsolving-ခွဲခြားရှုပ်ထွေးသောကိစ္စများနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ် options နဲ့အဖြေကိုလျှောက်ထားရန်သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက် critiquing.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသုတေသန-Analyzer တစ် layout ကိုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ချက်.
အလုပ်လုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်ဂီယာရွေးချယ်ရေး-ကိုစူးစမ်း tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ type ကို.
installation-Installing Device များ, ထုတ်ကုန်, ဝါယာကြိုးများ, features တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်များ.
function ခြေရာကောက်-မြင်လျှင်ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများ, ဘူးသီး, သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်သင့်လျော်စွာလည်ပတ်နေတဲ့စက်လည်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်.
ပစ္စည်းကိရိယာထုတ်ကုန်အပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုအကို Maintenance-ပွုလုပျခွငျးနှင့်အခါ upkeep အမျိုးအစားလိုအပ်ဖော်ထုတ်.
operating နှင့်အကြောင်းအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမှား troubleshooting-ဖော်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းတရားများ.
ပြုပြင်တာတွေ-ပြုပြင်ခြင်းလိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. devices များသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးအကဲဖြတ်-ကွပ်မျက်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုန်စည်စမ်းသပ်ခြင်း, ကုမ္ပဏီများမှ, သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ဖို့.
အာဏာရနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အများစုကိုသည်သင့်လျော်သည်သောတဦးတည်းကိုရှာဖွေဖြစ်နိုင်ခြေခြေလှမ်းများ၏ဆွေမျိုးအခကြေးငွေနှင့်အကျိုးအမြတ်နှင့် ပတ်သက်. -အတွေးအခေါ် Making.
စနစ်များလုပ်ကိုင်သင့်တယ်နည်းလမ်းအဘယျသို့သောအားသုံးသပ်ခြင်း-ကိုစူးစမ်းနှင့် setting ကိုအတွက်ပဲဘယ်လိုပြုပြင်မွမ်းမံ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, အဖြစ်ဝေဒနာတွေသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်.
အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု-စီမံခန့်ခွဲအခြားသူတွေ’ ကိုယ်ပိုင်ယခုအချိန်တွင် oneis အချိန်အဖြစ်.
ဝင်ငွေ task ကိုဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုရဖွယ်ရှိသည်မည်မျှချွေတာသုံးစွဲ-ဆုံးဖြတ်၏အုပ်ချုပ်ရေး, ဤအဥပဒေကြမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းနှင့်စာရင်းအင်း.
အလုပ်သမားအရင်းအမြစ်-တွန်းအားပေး၏စီမံခန့်ခွဲမှု, လေးလည်း, သူတို့အလုပ်လုပ်နေစဉ်ကလူကိုဦးဆောင်, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ဦးချင်းစီဖော်ထုတ်.
Connect ကိုရဲ့အဆင့် (သို့မဟုတ်အခြား 2-နှစ်ဇာတ်စင်)
High School တွင်ဘွဲ့ (GED သို့မဟုတ် High School တွင်ညီမျှသောအရည်အချင်းသို့မဟုတ်)
ထက်ပိုပြီး6ရက်သတ္တပတ်, တစ်နှစ်နူန်းကျော်ကျော်နှင့်အပါအဝင်
ဇွဲ – 91.69%
အာဏာ – 88.97%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 96.54%
အခြားသူများအဘို့စိုးရိမ်ပူပန်မှု – 95.36%
လူမှု Alignment – 94.50%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 95.71%
ဖိအား Threshold – 92.34%
ယုံကြည်စိတ်ချ – 95.51%
အနက်မှအာရုံစူးစိုက်မှု – 96.33%
ကျင့်ဝတ် – 95.93%
လွတ်လပ်ရေး – 91.59%
သစ်လွင်မှု – 91.15%
စဉ်းစား – 90.66%
ဧပြီလ 24, 2019 တွင် 9:48 ညနေ